ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အား သာလွန်သောပမာဏအထိ ရှူသွင်းမိပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ဆင်တူသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အောအန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အာရုံထွေပြားခြင်းနှင့် သေဆုံးမှုအထိ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းသည်သင်၏သွေးစီးကြောင်းတွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်များစုပုံလာသောအခါဖြစ်ပေါ်သည်။ လေထဲတွင် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အလွန်များနေလျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်သင်၏ သွေးနီဆဲလ်များအောက်ဆီဂျင်ကို ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဖြင့် အစားထိုးဝင်စေသည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သော တစ်သျှူးများပျက်စီးခြင်းနှင့် အသက်ပင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သည်ဓာတ်ဆီ၊ သစ်၊ propane၊ မီးသွေးသို့မဟုတ်အခြားလောင်စာများဖြင့်လောင်ကျွမ်းစေသောအရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိ၊ အရသာမရှိသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ လေ ဝင်လေထွက်မကောင်းသော ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွင်းနှင့် အင်ဂျင်များ၊ အထူးသဖြင့် တင်းကျပ်စွာအလုံပိတ်ထားသောနေရာ၌ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သည် အန္တရာယ်ရှိသောအဆင့်အထိစုနေနိုင်သည်။ သင် သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူရှိနေသောသူတစ်ဦး သည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ပါက လတ်ဆတ်သောလေ ရှိရာသို့ သွားပြီးလျှင် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရယူပါ။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့်အိပ်ပျော်နေသူ (သို့) အရက်မူးနေသောသူများအတွက် အထူးအန္တရာယ်များသည်။ လူတွေမှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေတာက တိမပြုမိခင်မှာပြန်ပြောင်းလို့မရတဲ့ ဦးနှောက်ပျက်စီးတာ ဒါမှမဟုတ်သေတာတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းသည်အငွေ့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အသက်ရှူလိုက်သောလေထဲတွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အလွန်များနေလျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်သင်၏သွေးနီဆဲလ်များအောက်ဆီဂျင်ကိုကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဖြင့်အစားထိုးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏တစ်သျှူးများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆီကိုအောက်ဆီဂျင်မရောက်ရောက်အောင်တားဆီးပေးသည်။
လောင်စာဆီသုံးပစ္စည်းများနှင့် အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးသည် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအရင်းအမြစ်များမှ ထုတ်လုပ်သော ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ပမာဏသည် များသောအားဖြင့်စိုးရိမ်စရာ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့အားပိတ်ထားသော သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ထားသောနေရာများတွင်သုံးလျှင် ဥပမာအားဖြင့် လေထွက်ပေါက်မရှိသော မီးဖိုချောင်အတွင်း၌မီးဖိုနှင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း - ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သည် အန္တရာယ်ရှိသောအဆင့်သို့ ရောက်နိုင်သည်။ မီးရှို့နေစဉ်မီးခိုးငွေ့ရှူမိခြင်းသည်လည်း ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်စေနိုင်သည်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ။ သန္ဓေသား၏သွေးဆဲလ်များသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆဲလ်များထက် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ကို ပိုမိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည် မမွေးသေးသောကလေးငယ်များကို ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းမှ ထိခိုက်လွယ်သည်။ ကလေးငယ်များသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်အသက်ရှူမကြာခဏ ပိုလုပ်ကြသည်၊ ၎င်းသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေသည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်မှုခံစားရသောအသက်ကြီးသူများသည် ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါသည်။ သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရာဇဝင်ရှိဖူးသူများသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ထိတွေ့မှုမှ ဖျားနာနိုင်ခြေပိုများသည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်သောသူများသည် သတိလစ်မေ့မြောခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ သတိလစ်ခြင်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သောထိတွေ့မှုကို ညွှန်ပြသည်။
ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာနှင့် ကြာချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ-အမြဲတမ်း ဦး နှောက်ပျက်စီးခြင်း သင်၏နှလုံးကို ထိခိုက်ခြင်းသည် အသက်အန္တရာယ်ရှိသောနှလုံးရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည် ဥပမာ-သန္ဓေသားသေဆုံးခြင်း (သို့) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း။
ရိုးရှင်းသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းစက်များတပ်ဆင်ပါ။ သင့်အိမ်ရှိအိပ်ခန်းတစ်ခုစီ၏အနီးရှိစင်္ကြံကိုတစ်ခုထားပါ။ သင်၏မီးခိုးငွေ့ဖမ်းစက်ဘက်ထရီများကိုစစ်ဆေးသည့်အခါတိုင်းဘက်ထရီကိုစစ်ဆေးပါ၊ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ် အချက်ပေးသံထွက်လာလျှင်အိမ်မှထွက်သွားပြီး ၉၁၁ သို့မီးသတ်ဌာနကိုခေါ်ပါ။ မော်တော်အိမ်များနှင့်လှေများအတွက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းစက်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
ကားကိုမစခင်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ သင်၏ကားကိုသင်၏ကားဂိုဒေါင်၌ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ပါနှင့်။ သင့်တွင်တွဲထားသောဂိုထောင်ရှိလျှင်အထူးသတိထားပါ။ ကားဂိုဒေါင်တံခါးဖွင့်ထားသည့်တိုင်သင်၏အိမ်၏ကျန်အိမ်နှင့်ကပ်လျက်နေရာတစ်နေရာတွင်သင်၏ကားကိုထားခဲ့ခြင်းသည်လုံခြုံမှုမရှိပါ။
အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းဓာတ်ငွေ့သုံးပစ္စည်းများသုံးပါ။ သင်၏အိမ်ကိုအပူပေးရန်ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုသို့မဟုတ်မီးဖိုကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။ ခရီးဆောင်ဓာတ်ငွေ့သုံးမီးဖိုအပြင်ဘက်ကိုသာသုံးပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူတို့ကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်လောင်စာဆီလောင်ကျွမ်းစေသောအာကာသအပူပေးစက်များကို သုံး၍ လေကောင်းလေသန့်ရရှိရန်တံခါးများသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ထားသည်။ မြေအောက်ခန်းသို့မဟုတ်ကားဂိုဒေါင်ကဲ့သို့အလုံပိတ်နေရာ၌မီးစက်ကိုမသုံးပါနှင့်။
သင်၏လောင်စာဆီသုံးပစ္စည်းများနှင့် အင်ဂျင်များကိုကောင်းမွန်စွာ လေဝင်လေထွက်ထားပါ။ ဤအရာများပါဝင်သည်:
သင်၏မီးဖိုအပါအ ၀ င်ဓာတ်ငွေ့သုံးစက်များအတွက်နှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုအကြောင်းသင်၏ utility ကုမ္ပဏီအားမေးမြန်းပါ။ သင့်တွင်မီးလင်းဖိုရှိလျှင်၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ပါ။ သင်၏မီးဖိုခေါင်းတိုင်နှင့်မီးကို နှစ်စဉ်သန့်ရှင်းပါ။ ပြန်လည်ပြုပြင်နေစဉ်လေ ၀ င်ပေါက်များနှင့်မီးခိုးခေါင်းတိုင်များကိုအပိတ်မထားပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကိုစောင် သို့မဟုတ်အပျက်အစီးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသို့မပြန်မီပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ပါ။ သင့်အိမ်၌ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် သင်ထိုနေရာသို့မပြန်မီ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပြုပြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ဒေသမီးသတ်ဌာန (သို့) အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသည်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
ပိတ်ထားသောဧရိယာတွင်အရည်ပျော်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါသတိထားပါ။ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ဆိုးဆေးများတွင်တွေ့ရများသော Methylene chloride သည်ရှူရှိုက်မိသောအခါကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သို့ဖြိုခွဲနိုင်သည်။ methylene chloride နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်စေနိုင်သည်။ အိမ်တွင်ပျော်ရည်များနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ၎င်းတို့ကို အပြင်ဘက်သို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာများတွင်သာသုံးပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီးအညွှန်းတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "Carbon monoxide poisoning" (October 2012). Critical Care Clinics 28 (4): 537–48. doi:10.1016/j.ccc.2012.07.007. PMID 22998990.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Schottke D (2016)။ Emergency Medical Responder: Your First Response in Emergency Care (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Jones & Bartlett Learning။ p. 224။ ISBN 978-1284107272။ 10 September 2017 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။2July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Caterino JM၊ Kahan S (2003)။ InaPage: Emergency medicine (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Lippincott Williams & Wilkins။ p. 309။ ISBN 978-1405103572။2July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်ခြင်း&oldid=720268" မှ ရယူရန်